Ebe Kasị Mma Ileta na Gris! - LucidPix
Na post blog a, anyị na-agụta ebe kachasị mma ịga na Gris, yabụ gaa n'ihu na-agụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ụsọ mmiri ọcha, oke osimiri doro anya na ọtụtụ nri dị ụtọ!
N’agbanyeghi onodu di ugbua n’uwa, ndumodu anyi bu ka ichebe peeji a na ibe edokwubara gi ma debe ya dika ihe mmuo maka mgbe odi nkpa njem. Na mgbakwunye, dobe mpịakọta maka ụfọdụ nnukwu 3D foto site na iji LucidPix.
Isi obodo Gris na-ahapụ gị ịlaghachite n'oge ma nyochaa akụkọ ihe mere eme ochie ha. Atens bu ebe njedebe zuru oke maka ndi choro ime ka njem ha di nma na ihe nlere anya nke oge na oge. Na Nnukwu obodo, otu n'ime akara ndị ama ama nke Atens, nwere akụkụ nke ọtụtụ ụlọ oge ochie, ọ dịkwa n'elu obodo ahụ. Ọbụghị naanị ndị njem ga-ahụ akara ngosipụta nke akụkọ ihe mere eme a, mana ha na-enwetakwa echiche dị ịtụnanya banyere Athens nke oge a n'okpuru.
Otu n'ime agwaetiti kachasị ewu ewu na Gris, Mykonos bụ naanị ụgbọ elu nke awa Athens, lee ihe dị iche na minit 60 na-eme! Ozugbo ị bịarutere Mykonos, a ga-anabata gị na anwụ, ụlọ na-acha anụnụ anụnụ na nke ọcha na ụdị ụsọ oké osimiri na-adịghị agwụ agwụ. Gaa na Paradise Beach (lee ya na 3D dị n'okpuru!) Maka ọnọdụ ikuku na-enye obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ga-ezuru ike, ịnwere ike ịchọta ebe zoro ezo n'akụkụ osimiri. Maka inweta ihe ndi ozo na Mykonos, lelee isiokwu a.
Ihe mejupụtara Santorini bụ ọtụtụ obodo ndị mara mma na-ele anya na mbara igwe na mmiri dị sachaa. Agwaetiti ahụ dị n'akụkụ ugwu bụkwa ebe ọrụ na-agbọpụ ọkụ, n'ezie “agwaetiti ndị na-eme Santorini malitere ịdị n'ihi nke oke ugwu mgbawa. ” Àgwàetiti ahụ zuru oke maka ịzụ ahịa boutique, iri nri ọnụ ọnụ, ma nwee oge dị ukwuu nke Instagramm.
Agwaetiti a Greek bụ ebe a ma ama njem maka ndị njem Britain nwere oge njem dị ka elekere 3 site na UK, ị nwere ike ịgbanahụ ihu igwe dị na London wee banye paradaịs ebe okpomọkụ n'oge ọ bụla! Corfu nwere ọtụtụ ntụrụndụ ị ga-ahọrọ, na ebe ndị enyi na-eme enyi na enyi. Maka ndepụta zuru ezu ebe ị ga-anọ, lelee Onye Njem Osimiri Mediterenian. Agbanyeghị ebe ị gara, nwalee usoro esi esi mmiri dịka “Pastitsada” na “Sofrito”.
Been gabuola n'otu n'ime ebe ndị a na Gris? Cgbanwe foto njem gị gaa 3D site na iji LucidPix ma echefukwala itinye mkpado maka ohere iji gosipụta anyị Instagram!
Esi mepụta GIF na LucidPix →← Echiche eserese nke oge 3D